Ungawenza kanjani amavidiyo wokuzalwa nephathi 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ukwenza ama-video ezinsuku zokuzalwa namaphathi omndeni kuhlale kumnandi kakhulu futhi kusondeza ababambiqhaza nakakhulu, ngoba kuzokwazi njalo ukukhumbula lezo zinkumbulo ngokuqala ividiyo, mhlawumbe eminyakeni embalwa ngemuva komcimbi noma ngemuva kwesikhathi esithile. Ngeshwa, akubona bonke abasebenzisi abakwaziyo ukuzulazula nokuthi hlobo luni lohlelo noma uhlelo lokusebenza abalisebenzisayo ukudala amavidiyo wokuzalwa nawamaqembu - amathuluzi wokuhlela amavidiyo akudala angaba nzima kakhulu ukuwasebenzisa, futhi abize.
Ukuhlangabezana nezidingo zawo wonke umuntu kulo mhlahlandlela, sihlanganise izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu, izinhlelo ezinhle kakhulu namasayithi amahle kakhulu aku-inthanethi ukudala amavidiyo wokuzalwa nawamaqembu, ukuhlinzeka ngamathuluzi wamahhala kuphela okulula ukuthi abasebenzisi be-novice bawasebenzise, ​​futhi ngandlela thile kumnandi.
FUNDA NONKE: Ungasingatha kanjani iphathi yokusakaza ividiyo
Dala amavidiyo wokuzalwa noma wephathi
Ezahlukweni ezilandelayo sizothola uchungechunge lwamathuluzi wokwenza usuku lwakho lokuzalwa noma ividiyo yephathi kusuka kumavidiyo aqoshwe nge-smartphone yethu noma ngekhamera yevidiyo yedijithali (kulabo abanayo). Njengoba ukuhlelwa kwevidiyo kungenziwa kunoma iyiphi ipulatifomu, sizokukhombisa izinhlelo ze-PC, izinhlelo zokusebenza ze-smartphone nezethebhulethi, kanye neziza eziku-inthanethi, ukuze ukwazi ukudala ividiyo yokuzalwa ngokumane uvule isiphequluli.
Izinhlelo zokwakha amavidiyo wokuzalwa
Uhlelo esingalusebenzisa ku-Windows ukwakha amavidiyo wokuzalwa nawamaqembu yilolu Isihleli sevidiyo se-EaseUS, ingalandwa mahhala kusuka kuwebhusayithi esemthethweni.
Ngalolu hlelo singadala amavidiyo wokudala sisebenzisa izihlungi, imiphumela kanye nabasizi abakheke kahle ukudala amavidiyo, ngaphandle kokuba ngochwepheshe abakhulu. Uhlelo lunikezwa mahhala kunguqulo yesilingo, kepha yonke imisebenzi iyatholakala ngokushesha ukuze isetshenziswe: empeleni, imikhawulo kuphela yalolu hlelo ukuba khona kwe-watermark ekhomba uhlelo kanye nomkhawulo wokuthekelisa wamavidiyo enziwe (ubuningi be-720p), weqiwa kalula ngokuthenga okubhalisile.
Olunye uhlelo oluwusizo kakhulu lokwenza amavidiyo wamaphathi nezinsuku zokuzalwa yi- I-Wondershare Filmora, ingalandwa mahhala ngeWindows ne-Mac kusuka kuwebhusayithi esemthethweni.
Ngalolu hlelo singakha amavidiyo amahle kakhulu ngokuchofoza okumbalwa kwegundane: ezimweni eziningi kuzokwanela ukuhudula ifayela levidiyo ukulihlela kusixhumi esibonakalayo sohlelo bese ukhetha omunye wemiphumela noma ushintsho olutholakalayo, ukwazi ukwenza okuwukuphela kwalo ividiyo yalolu hlobo. Uhlelo lwamahhala lunayo yonke imisebenzi edingekayo yokwenza ividiyo yethu kepha esigabeni sokuthumela ngaphandle luzofaka i-watermark eyisihlonzi: uma sifuna ukuyisusa, mane nje uthenge ilayisense lokusebenzisela ezentengiselwano.
Ukuthola ezinye izinhlelo zokuhlela ezisebenzisekayo zokwenza amavidiyo wokuzalwa nawamaqembu, siphakamisa ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu Dala isithombe sevidiyo, umculo, imiphumela njengombukiso wesilayidi wesithombe.
Isicelo sokwakha amavidiyo wokuzalwa
Ngabe sifuna ukudala usuku lokuzalwa nephathi lephathi ngqo kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi yethu, ngaphandle kokudlulisa okuqukethwe ukukuhlela kwi-PC? Kulokhu, sincoma ukuthi uhlole uhlelo ngokushesha. Quik, itholakala mahhala nge-Android ne-iPhone / iPad.
Iphasiwedi enalesi sicelo ijubane, empeleni kuzokwanela ukukhetha ividiyo ozoyihlela bese ukhetha esinye sezitayela eziningi zokuhlela ezitholakalayo ukudala ividiyo esezingeni eliphakeme. Uhlelo lokusebenza lukuvumela ukuthi uvumelanise ividiyo nanoma yimuphi umculo, unciphise izingxenye zevidiyo, bese ufaka izinhlamvu noma izihloko. Uhlelo lokusebenza lukhululekile ngokuphelele, awudingi ukukhokha noma ikuphi okubhaliselwe noma imisebenzi eyengeziwe.
Olunye uhlelo lokusebenza oluphelele kakhulu lokudala amavidiyo wokuzalwa nephathi Magisto, itholakala mahhala nge-Android ne-iPhone / iPad.
Ngalolu hlelo lokusebenza ungakha amavidiyo amahle futhi ahlekisayo emaminithini ambalwa, mane ukhethe ividiyo yokuqala, ukhethe enye yezitayela zokuhlela ezilungele ukusetshenziswa (kukhona nesitayela sezinsuku zokuzalwa namaholide ngokujwayelekile), engeza izitika nemiphumela ekugcineni Thumela ividiyo entsha, ukuze ukwazi ukuyabelana ngayo kumanethiwekhi omphakathi noma ezinhlelweni zokuthumela imiyalezo. Uhlelo lokusebenza lumahhala kepha lunemisebenzi ethile ekhokhelwayo, engathinti ukusetshenziswa kwayo.
Uma sifuna ukuzama ezinye izinhlelo zokusebenza zokuhlela ividiyo, siphakamisa ukuthi ufunde i-athikili yethu. Izinhlelo zokusebenza zomenzi wesilayidi ezihamba phambili ze-Android ne-iPhone.
Amasayithi aku-inthanethi ukudala amavidiyo wokuzalwa
Asifuni ukusebenzisa izinhlelo nezinhlelo zokusebenza ukwenza usuku lokuzalwa noma ividiyo yephathi? Kulokhu, vele uvule noma yisiphi isiphequluli sewebhu (kufaka phakathi iGoogle Chrome) bese uvula uKapwing, isihleli sevidiyo esiku-inthanethi esitholakalayo.
Isayithi lisebenza ngaphandle kokubhalisa futhi linikela ngawo wonke amathuluzi adingekayo ukudala ividiyo oyifunayo. Ukuyisebenzisa, cindezela inkinobho Chofoza ukuze ulayishe ukulayisha ividiyo ukuze uyihlele bese usebenzisa amathuluzi phezulu kwewindi ukwengeza umbhalo, ukufaka izithombe noma ithrekhi yomsindo; Ekupheleni komsebenzi sicindezela inkinobho enkulu ebomvu ye-Export video engxenyeni engaphezulu kwesokudla ukulanda ividiyo entsha, ukuze ikwazi ukwabiwa noma igcinwe kwimemori yedivayisi.
Enye indawo ethakazelisa kakhulu yokwakha ama-birthday nama-party amavidiyo online yi-Clipchamp, eqhathaniswa nesayithi langaphambilini enikeza izinketho eziningi ngaphandle kwebhokisi.
Uma usubhalisele mahhala kusayithi (singasebenzisa futhi i-akhawunti yakwaGoogle noma ye-Facebook ukufinyelela ngokushesha zonke izici), silayisha ividiyo ukuze sihlele bese sikhetha esinye sezifanekiso zamavidiyo ezitholakalayo, ukonga isikhathi esiningi. Ekugcineni cindezela nje Thumela ngakwesokudla ngaphezulu ukulanda noma ukwabelana ngevidiyo.
Uma sifuna ukusebenzisa amanye amasayithi wokuhlela ividiyo aku-inthanethi singaqhubeka nokufunda kumhlahlandlela wethu Amasayithi we-montage aku-inthanethi nokuhlelwa kwamavidiyo anama-remix nemiphumela ekhethekile.
Ukwenza ividiyo yosuku lokuzalwa noma iphathi yomndeni, akudingeki ukuthi sibe ngabaqondisi: sisebenzisa amathuluzi athulwe ngenhla esingakwazi sebenzisa izifanekiso noma izitayela ezenziwe ngomumo, ukuze ukwazi ukulayisha ividiyo bese uyifaka ngokumangazayo ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa. Uma singabathandi bokuhlelwa kwevidiyo, wonke amasayithi, izinhlelo nezinhlelo ezethulwayo zisivumela ukuthi siziphathe ngesandla, siveze ubuhlakani bethu.
Ukwenza amavidiyo ahlekisayo nenhle ongabelana ngawo kumanethiwekhi omphakathi, siphakamisa ukuthi nawe ufunde imikhombandlela yethu Isicelo sokwakha izindaba kusuka ezithombeni nakumavidiyo omculo (i-Android - i-iPhone) mi Dala Amavidiyo weLooping Boomerang bese Uhlela (i-Android App).
Izinhlobo ze-IPhone 12 nezinhlobo